Fananganana vehivavy - fomba, fampiofanana, fampiasana, teknika, fampiharana ao an-trano, simulators, baolina
Matokia bebe kokoa, mialà ary misoroka ny fisian'ireo olana "vehivavy", ary mbola mahazo fahatsapana vaovao amin'ny resaka firaisana ara-nofo dia hanampy amin'ny famolavolana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatanjahan-tena izay mampiroborobo ny fivelaran'ny hozatra akaiky, ary avela hiditra ao an-trano izy ireo.
Inona no atao hoe fandrobana ary ahoana no ataon'izy ireo?
Fanazaran-tena hanamafy ny hozatry ny vatana, antsoina hoe fèbildingom. Nitranga izany toe-javatra izany tamin'ny andro fahiny, ary niroborobo tokoa ny geishas ary nikarakara azy ireo, izay nahafantatra ny sakramentan'ny fitiavana. Raha ny fehezan-teny, "VUM" dia misakana ny hozatra amin'ny vaginaly. Misy lisitra voafaritra tsara amin'ny antony mahasoa ny fampiasana ny fanabeazana vehivavy:
Ho an'ny fahafinaretana . Ny hozatry ny hatsiaka dia manampy amin'ny fanamafisana orina ny fahatsapana mandritra ny firaisana ara-nofo. Ankoatra izany, ny vehivavy dia afaka manome fahatsapana mahatalanjona amin'ny lehilahy iray.
Ho an'ny fahasalamana . Ny fampiofanana tsy tapaka dia manatsara ny fatran'ny ra, mampihena ny habetsan'ny hormones ary misy fiantraikany amin'ny microflora.
Ho an'ny fandefasana mora . Noho ny hozatry ny vozona malemy dia azo atao ny miteraka haingana ny zaza ary tsy misy olana lehibe.
Ho an'ny endrika tsara tarehy . Sarotra ny maka sary an-tsaina hoe ny fampiasana nybildinga dia mifandray amin'ny hozatry ny rambony, ny andilany sy ny kibony.
Ny teknikan'ny famonoana
Alohan'ny fanombohana fampiofanana, tokony ho fantatrao ny fitsipika fototra sy ny endrik'io faritra io. Ny fampiofanana nybildingom dia afaka atao ao an-trano, saingy misy lamina manokana ho an'ny mpandray anjara. Ny fitsipika fototra amin'ny fampiofanana: tokony ho miboridana ny fofona, ary manolo-tena hikorontana sy miala sasatra tsikelikely. Manomboka amin'ny fiaran-dalamby miaraka amin'ny fampiharana tsotra indrindra ary mampihetsi-po azy ireo tsindraindray. Ny faharetan'ny kilasy voalohany dia 20-30 minitra, fa ny fotoana dia tokony hoentina 45 minitra.
Manome toro-hevitra ny manam-pahaizana fa miomana ianao alohan'ny hanaovana izany. Mandritra ny fampiofanana ny famoronana ao an-trano dia tadidio fa tokony hampivelatra ny fahaiza-manao ny anus ianao aloha raha tsy mampiasa ny hozatry ny kibo sy ny mason-koditra mba hanaisotra ny fanerena be loatra ao anatiny. Taorian'izany, zava-dehibe ny ianarana ny fomba fanamafisana ny fihetseham-ponao manokana ao amin'ny atidoha mandritra ny fiofanana. Voalohany, fidio tsotra ny fampiroboroboana ao an-trano ho an'ny fampiofanana:
Atombohy amin'ny fangatahana. Mipetraha eo an-damosinao, miala sasatra ary manomboka miaina, saingy amin'ny vavanao ihany. Aorian'io, avereno ihany koa, fa efa mijoro. Tsara ny manamarika fa mety hanjary tsy hilentika mandritra ny tsy mahazatra ny lohany ary heverina ho fitsipika.
Ny fampiharana fototra amin'ny débildinge dia misy ny fihenjanana sy ny fialan-tsasatry ny hozatry ny vagina.
Ankoatra izany, mifantoha amin'ny klitoris, izay tokony hiditra sy hamotsorana, avy eo amin'ny anus, mamerina ny fihetsika mitovy. Ity fanaingoana ity dia antsoina hoe "mibanjina".
Mipetraha eo an-damosinao, miala sasatra ary tsindrio ny tongotrao eo amin'ny tany. Tazony eny amin'ny tadiny ny tananao, ary ny tongotrao - amin'ny sakan'ny soroka, ka mangeja azy amin'ny vatanao. Atsofohy eo amin'ny tany ny valin-doha, ary farao izany. Mba hampihetsi-po ny fampihorohoroana, rehefa misandratra ianao, dia tokony hanongotra ny sphincter sy ny vagina, ary miala sasatra rehefa mampidina ny lakolosy.
Mitsangàna, ataovy amin'ny tongotra ny tongotrao. Tafio ary atsaharo ny hozatry ny basikety, mihetsiketsika sy ao anatiny. Aorian'izany, dia apetraho eo amin'ny tany, ny fanantonana ny lohalika, ary apetraho amin'ny tananao ny lohanao izay mitsangana eo amin'ny tany miaraka amin'ny elatry ny elany. Ataovy toy izany koa ny fihetsikao.
Misy karazana simulators samihafa azo ampiasaina hanatsarana ny valiny.
Laser . Ampiasao ity mpampiofana ity ho an'ny olona izay azonao antoka fa manatanteraka tsara ny fampiharana. Ny fampiharana ny famolavolana ao an-trano, miaraka amin'ny fanampin'ity simulator ity dia afaka manara-maso ny fahombiazan'ny fampiharana, noho ny laser pointer.
Pneumatic . Ity mpandinika ity dia mandinika ny vava ambony noho ny fitomboan'ny tsindry anatiny. Ampiasao izany raha tsy eo ambany fanaraha-mason'ny manam-pahaizana iray. Ireo modely maoderina dia manana sensor sy efijerina portable mba hanarahana ny vokatra.
Kitapo ho an'ny fanorenana
Afaka mahita an'io simulateur io ianao ao amin'ny fivarotana entana iray na mandidy izany amin'ny Internet. Misy baolina samihafa, samy hafa amin'ny lanjany sy ny diamondra, ary mazava ho azy fa mila manomboka amin'ny kely indrindra ianao. Alohan'ny hampiasana azy ireo dia tsy maintsy ampiharina foana ny menaka. Ny fanaovana fanbildinga amin'ny baolina dia toy izao:
Ilaina ny mitsangana sy miantoka ny bala amin'ny vagy. Tokony hijanona ivelany ilay tady.
Ekeo ny fisehon'ny mpitaingina, mametraka ny tongony eo amin'ny sakan'ny soroka, mamelatra ny tongotra ao anatiny, ary mitazona ny lohalika eo amin'ny toerana avo-bent. Tokony havanana ny lamosina.
Ny tanjona dia ny mametaka sy mamihina ny hozatra. Zava-dehibe fa tsy mivoaka ny baolina. Duration - minitra maromaro.
Fiasa tsara ho an'ny fampiofanana - atody jade, izay nampiasain'ny geisha tamin'ny andro fahiny. Ny tombony amin'ity fitaovana ity dia ny natiora tanteraka. Ny vokatra ho an'ny saryingitra noho ny fampiasana ny entana dia ho tsara kokoa, saingy ny fampiharana toy izany dia mila atao amin'ny fiomanana. Manomboka amin'ny fampiasana atody lehibe iray ary aorian'ny fotoana fiomanana amin'ny hozatra dia azonao atao ny mampihena ny diam-penina. Ny enta-mavesatra dia azo ampidirina fotsiny ao anaty vagao, voapoizina amin'ny antiseptika , ary mitondra nandritra ny andro, na manao ny fampisehoana naseho etsy ambony.
Fandrobana sy orgasme
Vehivavy maro no mampiasa fanatanjahan-tena mba hanatsarana ny fahatsapan'izy ireo mandritra ny firaisana ary hanome fahafinaretana ny namana. Izany dia hazavaina amin'ny hoe ny fihenan'ny mozika voaofana dia mahita tsara kokoa ny hetsika mitranga ao amin'ny vagina, ary ny faritra erogenous dia ho mora kokoa. Ny fampiofanana ny fanatanjahantena hozatra akaiky, araka ny fanadihadian'ny vehivavy mampihetsi-po, dia manampy ny mahatsapa ny orgasme amin'ny firaisana ara-nofo rehetra ary na dia mihoatra ny indray mandeha aza. Ankoatra izany, afaka mifehy ny fihetseham-po sy ny fahatsapana ilay mpiara-miasa ianao.
Fandrobana mandritra ny fitondrana vohoka
Ho fiomanana amin'ny fahaterahana zaza iray, vehivavy maro no mandray anjara, manao sy mampihatra ny hozatry ny vaginal. Zava-dehibe ny manao ny zava-drehetra amim-pitandremana sy manofana amin'ny alàlan'ny fanomezan-dalana avy amin'ny dokotera, ary raha misy ny loza mety hitranga. Ny fampiroboroboana ny vehivavy bevohoka dia manatsara ny fiforonan'ny rà ao amin'ny faritra miafina, mampihena ny loza ateraky ny hemorrhoids ary mampitombo ny elasticité ny lakandrano. Manolo-kevitra ny hanao fampiharana araka ny tokony ho izy sy ny antsasaky ny fo, satria tsy azo ekena ny fitomboan'ny tsindry anatiny. Tsy azo ampiasaina amin'ny vehivavy bevohoka ny simulators de modification.
Fampandrosoana taorian'ny fiterahana
Dokotera maro no manoro hevitra fa ny vehivavy, toy ny programa famerenana amin'ny laoniny, dia mitarika fampiofanana mba hampivelatra ny hozatra anaty. Ny antony iray dia ny toe-javatra misy fahasarotana lehibe aorian'ny fiterahana. Ny tombotsoan'ny fitsaboana dia ny fanamafisana ny hozatry ny lakolosy miafina izay natsangana, ary ny gazety, hamerenana ny haben'ny vava, ary hanatsara ny fampiasana ny tsinay sy ny blaogera. Ankoatra izany, ny fampiofanana amin'ny vanim-potoanan'ny postpartum dia hampitombo ny dingan'ny famerenana amin'ny fiterahana indray ny teboka, ary ny fisaorana rehetra noho ny fampidiran-dra ny taovam-pananahana.
Vumbilding - fifanoherana
Faly aho fa ny fanofanana toy izany dia manana fihenan-keloka faran'izay kely, saingy misy izy ireo. Tsy azonao atao ny miatrika ny fisian'ny aretina amin'ny rafi-pihariana génitainina amin'ny dingana ety sy ny areti-nify miaraka amin'ny tazo. Occupations bybildingom dia mifanohitra amin'ny vehivavy bevohoka any aoriana, miaraka amin'ny myomas , cysts ary amin'ny fotoana aorian'ny fandidiana sy ny aretina mafy.
Boky momba ny abbudgingu
Raha liana amin'ity lohahevitra ity ianao, dia manoro hevitra ny manam-pahaizana mba handinika ireto boky manaraka ireto:
" Gymnastics momba ny vehivavy " E. Smirnova. Ny mpanoratra dia dokotera manam-pahaizana manokana momba ny gymnastique akaiky. Ity boky ity dia mamaritra ny fomba fitenenana momba ny fako amin'ny sary mba hahatakarana tsara ny fampiharana.
"Ny fomba fanaraha-maso ny hozatry ny saina " nataon'i E. Frolova. Ny mpanoratra dia miresaka momba ny tantaran'ny fampivoarana ny fomba amam-panao, mamaritra fampiharana miafina ary manome torohevitra mahasoa.
" Ny hozatry ny fo. Vumbilding » Muranivsky. Ny mpanoratra dia mpahay siansa izay namolavola voalohany ny teoria amin'ny fanamafisana ny hozatry ny vehivavy. Nanolotra boky maromaro momba ity lohahevitra ity i Muranivsky.
" The Vagiton System " Yu. Kornev. Ao amin'io boky io, dia misy fiteny iray azo zaraina momba ny anatomie sy ny fiasan'ny vehivavy. Avy amin'ireo pejy dia azonao fantarina hoe inona ny fanorenana, ahoana no fomba ampiharana ny fampiharana sy ny fampiharana ny simulators .
Proteinina - fiantraikany hafa
Manaova fanamaivanana haingana
Ahoana no tokony haka L-carnitine?
Afaka mahazo lanja miaraka amin'ny fanampiana hoopy ve aho?
Fanazarana amin'ny simulateur ho an'ny vehivavy
Alex Pettyfer sy Emma Roberts
Kilalao amin'ny taratasy amin'ny tanany
Ireo vokatra izay manatsara ny fahatsiarovan-tsaina sy ny atidoha
Demi-taona fitafy ho an'ny vehivavy - inona no tokony hatao ao anatin'ny vanim-potoana azo ovaina?
Natalia Vodyanova - biography
Tavoahangy maitso - voankazo kalorie
Nodules in the Thyroid - Symptoms and Consequences
Charlotte tsy misy lafarinina
Chocolate sour cream - recipe
Ny voan'ny aretina mitaiza - aretina sy fitsaboana
Nikiakiaka tao anaty torimaso ilay zaza